Taariikh Nololleedka RW Hore ee Soomaaliya, Nuur Xasan Xuseen (Nuur Cadde) | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Cadde (1938-2020)
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya, Nuur Xasan Xuseen (Nuur Cadde) ayaa London ugu geeriyooday xanuunka Coronavirus, sida ay qoyskiisa xaeiijiyeen. Bishii hore ee March 26, ayaa la dhigay cisbitaal ka dib markii uu ku dhacay fayraska Covid-19, sida uu xilligaas xaqiijiyay wiilkiisa oo BBC Somali la hadlay.
Nuur Cadde wuxuu shaqadiisii ugu horreysay ku billaabay Sarkaal canshuuro, 1958-dii, laba sano ka hor intii Soomaaliya aysan qaadan xuriyadda. Wuu dalacay illaa uu ka gaaray heerar sare oo la xiriira hoggaanka booliska. Wuxuu sidoo kale la shaqeeyay hay’ado boolis oo caalami ah. “Wuxuu ahaa nin aqoon sare leh. Wuxuu wax ku soo bartay Taliyaaniga. Wuxuu ahaa nin afgaaban oo dabeecad macaan”, ayuu yiri Subxaanyo.
Ka dib markii uu ka baxay jaamacaddii Umadda Soomaaliyeed, wuxuu ku biiray Jaamacadda Room. Wuxuu labadaas Jaamacadood ka bartay Culuumta Shuruucda, sida ay xaqiijiyeen dad badan oo ay isla soo shaqeeyeen. Ka dib Burburkii wuxuu u wareegay hay’adaha Gargaarka, wuxuuna la shaqeeyay hay’ado caalami ah sida Hay’addii Bisha Cas ee Soomaaliya (SRCS).
Howlihiisii Ciidanka Boliiska Somaaliya
Alle ha u naxariisee, Nur Cadde intii uu ka tirsanaa ciidanka boliiska Soomaaliya wuxuu ka gaaray darajada Gaashaanle Sare, xilal kala gedisan ayuuna ka soo qabtay qeybaha kala duwan ee Taliska Ciidanka Boliiska. Wuxuu taliye ku xigeen ka soo noqday xafiisyada qeybta Ciidanka, Xafiska qeybta Siyaasada iyo abaabulka iyo qeybta xiriirka caalamiga ah ee INTERPOL. Sannadihii 1976 – 1983 waxaa uu ahaa Madaxa Xafiiska tababarada iyo qorsheynta ee Ciidanka Boliiska Somaaliya.
Si gaar ah Booliskii uu ka tirsanaan jiray “waxaa ka tagay nin qiimo leh oo waxbadan ka soo qabtay”. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ka tacsiyeeyay geerida Nuur Cadde wuxuu yiri: “Waxaan ka wada shaqeynay arrintii dib u heshiisiinta ee 2008-2009. Wuxuu ahaa in qiimo leh oo nabadda aad u jecel”.
Tags: Nuur Xasan Xuseen (Nuur Cadde)Taariikh Nololleedka RW Hore ee Soomaaliya
Next post Waa 9 Jir Jaamacad Ka Qalin Jabiyey, Sidee Ku Suurta Gashay?
Previous post Xirfadaha Gawaarida: Bareega, Kileeshka, Santuukha Geerka, Isteerinka iyo Tuulka Baabuurta